Mutengesi wezvokutengeserana muna 2021
Iyo 2021 Spring Kunze uye Export Trade Fair yakaitirwa muShijiazhuang Guta, Hebei Province, China. Kambani yedu yakawana huwandu hukuru hwekutengesa mubooth No. 22, uye yakatora chikamu mumabasa ekutengesa nekusimudzira mukamuri yekutepfenyura. Zvigadzirwa zvedu zvakarumbidzwa zvikuru nemunhu wese.
Chibage chekutengesa chinotaridzika kubatsira
Kutaura kuti "zvinhu zvakasiyana" mu2020 kutaura pachena pamusoro pesimba reCOVID-19 pane zvese zvese. Asi panogona kuve nekona imwe yemusika wegorosi uko iyo cliché iri yakawanda nuanced, uye izvo zvinogona kukanganisa yako yekuchengetera sarudzo yezviyo sekukohwa kunotanga kudzika pasi kutambanudza imba ...
Mbeu Zviyo Kuputira Machine Kuputira Machine
Mbeu yekumhara Machine, Kurapa Muchina unogadzirwa zvichibva mukubatanidzwa kwedzidziso uye maitiro. Chigadzirwa magadzirirwo: Kunonyanyisa kugadzirwa: 5000kg / awa (0-5000kg) Simba rekutsigira: 1.5kw mota booster simba: 120W simba rekushandisa Huwandu: 1.6 madigiri / awa Kusimudza kureba: 90 cm Kurema: 170 ...
4.3m Gabion netting muchina / Hexagonal waya mesh muchina / Hot kutengesa gabion kugadzira muchina muChina tsananguro
Yedu gabion ndeye rectangular waya mesh bhokisi rakagadzirwa kubva kwakapetwa makona mana emakona mesh uye weldmesh yesimbi waya, nekuwedzera inosimbiswazve neselgesges yeinorema tambo inomhanya ichitevedza mativi uye nema transverse diaphragms. Aya mesh mabhokisi anoendeswa kune saiti yakazara-yakazara, uko kwavakaungana ...
Yehuku yekugadzira tekinoroji: Yakafukidzwa yehuku | 2020-08-31
Imwe yenzira huru yekugadzira huku huku kuwedzera kukosha kune chero chigadzirwa chingwa. Iwo maviri makuru zvikonzero mapurosesa anowedzera breadcrumbs kuhuku ndeyekusimudzira kana kuwedzera kuravira uye kugadzirwa. "Ini ndinotenda kune maviri makuru mashandiro echingwa muhuku yehuku, furati uye kumba kunyorera," akadaro ...
Muchina wevatengi wevatengi mbeu yekusarudza mhodzi yakagadzirira kuendeswa
Muchina wevatengi vekusarudza mbeu muchina wagadzirira kuendesa, ndinokutendai nerutsigiro rwenyu uye kuzivikanwa.
DW200-2000 Heavy Duty Mhete Yakarukwa Press Yainzwa Kutenderera
Izvi zvinoshanda kuruka yakakwirira-simba bepa kugadzira rakarukwa muchina wokudhinda akanzwa neicho chechokwadi, kunyanya mhete rakarukwa wokudhinda akanzwa.
2020 Uganda vatengi odha
Kutenda kune vatengi muUganda nekutenga 5XZFHS-25 mbeu yekuchenesa.
Chikumbiro chekushandisa uye zvakanakira yakatarwa giravhiti concentrator
Yakananga giravhiti yekuunganidza iri nyore, nyore kutsiva akasiyana mesh skrini. Inogona kushandiswa nekutakura. Inoshanda nzvimbo: Inogona kushandiswa nekushandura iyo skrini pamusoro peakasiyana maratidziro uye maumbirwo: 1. ine yakasarudzika giravhiti musiyano coefficient yemarudzi ese egranular mate ...
Nheyo yekushanda yemuchina wekusarudza
Mupuri anosarudza mbeu munzira ipi? Ndeipi nheyo yemuchina wekusarudza? Ndeapi anoverengeka anoshanda emushini wokusarudza? Mushini wekugadzirisa unobva pachisungo chekuti zvidimbu uye kuwanda kusarura chiitiko kunoitika mune yekudziisa maficha egranular mater ...
Ndeapi maitiro eiyo screw conveyor
Screw conveyor ine zvinotevera hunhu: 1) Maumbirwo acho ari nyore uye mutengo wakaderera. 2) Basa rakavimbika, gadziriso yakapusa uye manejimendi .. 3) Yakakura saizi, diki chikamu chemuchinjikwa chikamu, tsoka diki Pamusuwo nekubuda, hofisi yevashandi iri nyore kuburutsa ...
Shijiazhuang Tefeng Kutengesa Co, Ltd.